Ifenisha ye-Marble-Ithebula Nobuciko - I-Morningstar Stone Co., Ltd.
Lesi sinyathelo sibalulekile futhi sibalulekile kuzo zonke izinyathelo ezilandelwayo. Amatshe ama-cubic block nama-slabs kusatshalaliswa kabanzi impahla eluhlaza ekulungele ukucubungulwa. Ukukhethwa kwezinto zokwakha kuzodinga ulwazi oluhlelekile lwezinhlamvu ezibonakalayo kanye nokusetshenziswa kanye nengqondo ekulungele ukutadisha noma yini entsha. Ukuhlolwa okuningiliziwe kwempahla eluhlaza kuhilela: ukulinganisa ukurekhoda nokuhlola ukubukeka komzimba. Inqubo yokukhetha kuphela eyenziwe kahle, umkhiqizo wokugcina ungadalula inani lalo lobuhle nokusetshenziswa kwalo. Ithimba lethu lokuthengwa kwempahla, lilandela isiko lenkampani lokukhiqiza imikhiqizo esezingeni eliphakeme kuphela, linobuchule ekutholeni nasekuthengeni izinto ezisezingeni eliphakeme. ▼
Imininingwane yokudweba / ukuklanywa kwesitolo
Ithimba elinekhono elingasebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene zesoftware yokudweba ngolwazi oludingekayo lokukhiqiza liyasihlukanisa nabanye abaningi esincintisana nabo. Sihlala sikulungele ukunikela ngezixazululo ezenzelwe kakhulu noma yikuphi ukwakheka nemibono emisha. ▼
Umsebenzi wezandla nemishini kuyangezelana. Imishini idala imigqa ehlanzekile nobuhle bejometri, kuyilapho i-handcraft ingangena ijule ngesimo esingajwayelekile futhi ivele. Yize iningi lomklamo lingafezwa ngemishini, isinyathelo se-handcraft sibalulekile ekunikezeni umkhiqizo ubumnandi nokuhlanjululwa. Futhi ngakwimidwebo ethile yomkhiqizo nomkhiqizo, i-handcraft isaphakanyiswa. ▼
Sinezigaba zokupakisha ezikhethekile. Ngesitoko esivamile sokhuni neplywood ebhodini efektri yethu, siyakwazi ukwenza ngokwezifiso ukupakisha ngohlobo ngalunye lwemikhiqizo, kungaba ejwayelekile noma engajwayelekile. Abasebenzi abangochwepheshe abaphekela ukupakisha komkhiqizo ngamunye ngokucabangela: umthwalo olinganiselwe wesisindo sokupakisha ngakunye; ukulwa ne-skid, anti-collision & shockproof, ukuvimbela amanzi. Ukupakisha okuphephile nobuchwepheshe kuyisiqinisekiso sokunikezwa okuphephile komkhiqizo ophelile kumakhasimende. ▼